Home News Faarax Macalin”Soomaaliya in shidaal laga qodo Qatar ayaa diidan”
Faarax Macalin”Soomaaliya in shidaal laga qodo Qatar ayaa diidan”
Siyaasiga Faarax Macalin oo ka mid ah Siyaasiyiinta taageera Dowladda soomaaliya marna soo noqday Guddoomiyaha Aqlabiyada Baarlamaanka Kenya ayaa qaar ka mid ah wadamada Khaliijka ku eedeeyey inay diidan yihiin wax soo saarka shidaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in dalalka, Sacuudiga, iyo Qatar ay dhowr jeer baajiyeen Shirar looga hadli lahaa Arrimaha Shidaalka Soomaaliya kaas oo lagu qaban lahaa dalalka turkiga iyo Itoobiya, hayeeshee ay dowladda Soomaaliya looga baahnaa inay dhegaha ka fureysato.
Waxa uu Siyaasiga Faarax sheegay in Soomaaliya ay heysato Block dhan 280 oo shidaal ah,isla markaana horay loo soo bandhigay lana xaraashay 53 ka mid ah waxa kaliya ee haatan la isku heysatana uu yahay 3 Block.
Dhinaca kale Siyaasiga oo la hadlayay mid ka mid ah tv-yada ku hadla Afka Soomaaliya ayaa waxaa Wasiirka Batroolka uu ku eedeeyey in uu Shaqada ka joojiyey Saddex Agaasime oo Aqoonyano ahaa,isla markaana booskooda uu kuwo kale geliyey.
Previous articleBanaan-baxyo culus oo ka dhacay gobolada Nugaal iyo Galgaduud
Next articleMas’uuliyiinta Gal-mudug qaarkood oo 2-sano Mushaar qaadan (Aqriso sababta)
Ciidamada Jubbaland oo gacanta ku dhigay Maandooriyaha Xashiish-ka oo Kismaayo lagu iibinaayay!!